kkchha.com:: मंसिर २४ बाट प्रदर्शन हुने चलचित्र ”पार्सल” हेरेर कमेन्ट गर्नुहोला :सृजना वानेम (फिल्मको ट्रेलर सहित)
मंसिर २४ बाट प्रदर्शन हुने चलचित्र ”पार्सल” हेरेर कमेन्ट गर्नुहोला :सृजना वानेम (फिल्मको ट्रेलर सहित)
By प्रकाश धिताल December 1, 2016
केकेछ डटकम – प्रकाश घिमिरे – काठमाण्डौ – मङ्सिर १८
शहर बाट गाउँमा होस् या गाउँ बाट शहरमा होस्, बिदेश बाट देशमा होस् या देश बाट बिदेशमा होस् आफन्त इष्टमित्रहरुलाई कोशेली स्वरुप केहि चिजहरु पठाईने गरिन्छ । त्यहीं चिजलाई नै सामान्यतया पार्सल भनिन्छ ।लाहुरेले परदेशमा दुख गरेर कमाएको पैसाले घरमा पठाएको पार्सल बाट उत्पन्न हुने नयाँ मोड नै चलचित्रको मुख्य बिषयवस्तु रहेको पार्सलका निर्माता किशोर सम्बाहाम्फेले बताएका छन् ।
यहि पार्सल चलचित्र मंसिर २४ गते बाट देशै भरको ६५ भन्दा धेरै हलहरुमा एकै साथ् प्रदर्शन हुन गईरहेको छ । काठमाडौको एयरपोर्टदेखी पूर्वको पाथीभरा मन्दिर, चतरा, इलाम,धरान, महेन्द्रनगर लगायतका पर्यटकीयस्थलमा छायाँकन गरिएको चलचित्र पार्सल नेपालीहरुको वास्तविक कथामा आधारीत छ । मौलिक कथावस्तु रहेको चलचित्र पार्सलले प्रदर्शन हुन अगावै ३० लाख भन्दा बढि कमाइ सकेको छ ।
धरानका रविन श्रेष्ठको डेब्यु निर्देशन रहेको ‘पार्सल’मा सिंगापुर प्रहरीका इन्स्पेक्टर प्रभु श्रेष्ठ, खेलाडी किशोर सम्बाहाम्फे, सृजना वानेम, किशोर खतिवडा, विक्रम सिंह, सोनु जयन्ती, प्रेसिका निरौला, पुजा तामाङ, नीता ढुङ्गानालगायतले अभिनय गरेका छन् ।
यहि चलचित्रमा नयाँ जोश जाँगर लिएर आएकी नव नायिका सृजना, झापाको बुधबारेमा जन्मिएकी हुन् । सृजना १० बर्षको उमेर हुँदा सम्म बुधबारेमै बिताएर बसाईं सराईकै क्रममा झापाकै खुदुनाबारी पुगेकी सृजनाको परिवार व्यापारी हो । मानन्द शिक्षा सदन बुधबारे झापामा ५ कक्षा सम्म पढेपछि सृजना अहिले बिर्तामोडमा ब्याचलर प्रथम बर्षमा अध्ययनरत छिन् । सृजनाको एक दाजु,दुई बहिनी छन् ।
पार्सलको रुपमा सुन-चाँदीका गहना,लता-कपडा मात्रै हैन, मृत शरीर(डेथ बडि) पनि पार्सल बन्न सक्छ भन्ने चलचित्रको निर्माता किशोर सम्बाहाम्फेको दाबि छ । आज देशमा बेरोजगारको विकल्प ४० लाख भन्दा बढि, युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा छन् भने,हरेक दिन पाँच वटा जति युवाहरु बाकसमा थुनिएर नेपाल आउछन् । यसरी भविष्यको सुन्दर सपना बोकेर आफ्नो जन्म दिने बाबु-आमा,दाजु-भाई,ईष्ट-मित्र, आफ्नो प्रेमी-प्रेमिकालाई छाडेर पैसा कमाउन जादा त्यतै मृत्यु भएपछि पार्सलको रुपमा आफ्नै लाश उपहार स्वरुप नेपाल आउदा परिवारमा पिडा कति हुन्छ ? यहि चलचित्र पार्सलको नायिका सृजना वानेम संग केकेछ डटकमको लागी ईन्द्र जिजीविषाले गरेको कुराकानी ।
नेपाली कथानक चलचित्र पार्सलमा अभिनय गर्नु भएको रहेछ। त्यो कस्तो चलचित्र हो ?
पार्सल चलचित्र, नेपाली मौलिक कथावस्तुमा, हाम्रै समाजमा घट्ने घटनाहरुको दृश्यहरु र नेपाली समाजका संस्कार संस्कृतिलाई देखाइएको फिल्म हो । चेलीबेटी बेचाबिखान गर्ने जस्ता नयाँ तरिका पनि देखाइएको छ ।
यस चलचित्रमा तपाइँको भूमिका चाहीं के छ ?
यो चलचित्रमा मेरो,एउटा लाहुरेको छोरी, एउटा लाहुरेको बहिनीको चन्चले भूमिका रहेको छ ।
यो तपाइँको अभिनय रहेको पहिलो फिल्म हो । कस्तो लाग्यो त पहिलो पटक क्यामेरा फेस गर्दा ?
एकदमै गाह्रो लागिरहेको थियो । काम गर्दै गए पछि बानि भएँ, त्यसपछि सामान्य लाग्यो ।
तपाइँलाई,अब फेरी, काम गर्ने जोश जाँगर कतिको छ ?
त्यतिबेला चाहीं, अब काम गर्दिन भन्ने मन भएको थियो, अहिले चाहीं बिर्से । अब फेरी काम गर्न मन लागेको छ ।
यो पार्सल फिल्ममा,अभिनय गरिसके पछि, अर्को कुनै फिल्ममा काम गर्नु भएको छ ?
मैले गरेकी छैन । यो चलचित्र रिलिज नभए सम्म अर्को चलचित्रमा गर्दिन भनेकी छुँ ।
यो फिल्ममा काम गरेपछि,अरु कुनै निर्माता निर्देशकहरुले अफर गरेको छ ?
अहिले अफर आएको छैन, पहिला आएको थियो तर मैले काम गरीन ।
तपाइँले बाहिर बाट देख्नु भएको फिल्म इण्डस्ट्रिज र फिल्म इण्डस्ट्रिज भित्र पस्दाको अनुभव कस्तो भयो ?
बाहिर बाट हेर्दा जति सजिलो देखिन्छ, भित्र छिरिसके पछि,एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ । कति संघर्ष गर्नु पर्छ नायिका बन्न भन्ने त्यहीं गएपछि मात्र थाहाँ हुँदो रहेछ ।
अब तपाइँको पहिलो फिल्म रिलिज हुदैछ, कतिको उत्साही हुनुहुन्छ ?
उत्साहित धेरै नै छु । साथमा धेरै डराएकी पनि छु ।
यो चलचित्र निर्माणको क्रममा सुटिङ्ग स्पोटमा दुख र सुखको क्षण कुनै छ त्यस्तो ?
खासै दुखको क्षण त छैन, काम गर्दै जादा रमाईलो नै लाग्यो । रमाईलो चाहीं ताप्लेजुङ्गको पाथिभरा जाँदा र कोशीको पानि माथि फाइटको दृश्य दिदा पानि भित्र डुब्दाको क्षण रमाईलो र गाह्रो पनि भएको थियो । कोशीको पानीमा किशोर सर र हामी साचिकै डुबेका छौं ।
तपाइँलाई यो चलचित्रमा जोडीको रुपमा कसले साथ दिएको छ ?
मलाइ यो चलचित्रमा प्रभु श्रेष्ठले साथ दिएको छ , जो उहाँ सिंगापुरमा हुनुहुन्छ ।
अब अन्त्यमा केहि भन्नु हुन्छ की ?
यो मेरो पहिलो चलचित्र हो । तर पनि मैले फिल्म सुटिङ्ग हुनु अगाडि, एक महिने वर्कशोप गरेकी थिएँ त्यसैले गर्दा राम्रै गरेकी छु । अब आउने फिल्महरुमा अझ सुधार्दै राम्रो गर्ने छु । यो चलचित्र मंसिर २४ गते देशै भरको ६५ भन्दा धेरै हलहरुमा एकैसाथ प्रदर्शन हुदैछ । हल सम्म गएर एक पटक हेरी दिनुहोला भन्न चाहन्छु । चलचित्र हेरेर राम्रो नराम्रो जे जस्तो देख्नु हुन्छ, मलाई सुझाव सल्लाह दिनुहोला । चलचित्र हेरे पछि तपाइँको कमेन्टको लागि प्रतिक्षामा हुनेछु ।
पार्सलको ट्रेलर यहाँ हेर्नुहोस